Chitter: Avadiho ho mpanjifa ambasadaoro marika ny fizarana ara-tsosialy! | Martech Zone
Chitter dia fampiharana manome valisoa anao amin'ny tolotra maimaim-poana sy fihenam-bidy manokana amin'ny famoahana sary amin'ny tambajotra sosialinao. Afaka miditra tsy misy sarany ny orinasa, manangana tolotra izay ho hitan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny lampihazo. Mba hanavotana ilay tolotra dia mila mizara sary iray mampiroborobo ny fananganana amin'ny tambajotran-tserasera izy ireo.
Chit (famaritana) - Tolotra manokana, fanararaotana mitahiry vola, fanentanana, na tapakila azo zahana amin'ny fampiharana Chitter fotsiny.
Chitter dia fampiharana hita-monina hita amin'ny Android sy iOS. Amin'ny fizarana sary dia mivarotra sy mampiroborobo ny vokatrao, serivisinao ary zavatra niainanao ho anao ny mpanjifanao. Izany dia mety hampiakatra be ny fahatratraranao sy ny fahitana anao amin'ny haino aman-jery sosialy, hampihena ny vidin'ny mpanjifa vaovao, ary hampitombo ny fitazonana ny mpanjifa.
Chitter Maimaimpoana ny fisoratana anarana amin'ny orinasa ary ary minitra vitsy vao hatsangana. Malalaka ianao mampakatra toy ny maro Chits arak'izay tianao ho hita eo amin'ny orinasanao na ny orinasanao Chitter dia mampiseho valiny amin'ny fampiharana finday. Chitter manana fampiasa premium izay manome ny tolotra voatanisa amin'ny motera fikarohana, mahazo ny adiresy mailaka ho an'ny mpampiasa ary mandinika Analytics ny demografikan'ny mpanjifanao.
Eric Dye dia manana tafatafa tsara amin'i Seth Knapp, ny Chief Officer Officer ao Chitter, ao amin'ny Tambajotra Podcast Network.
Tags: fisoloana vavampiarochitterfanentanana ho an'ny mpanjifaeric dyemandrisikampisolovava amin'ny antsinjaranypaikadin'ny media sosialy antsinjaranyfifampizarana ara-tsosialyseth knappfizarana sosialy